अख्तियारका पूर्व प्रमुख घिमिरे, गभर्नर अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्वय श्रेष्ठ र शिवाकाेटी।
नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट चोरी तथा अन्य अहम् सवाल उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरी र छानवीनको फाइल गायब भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग श्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरका सेटिङमा अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिएको हो।
वि.सं. २०७६ साउनमा अख्तियारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका अनियमितता छानवीन गरिपाउँ भनि एक निर्देशक र तल्लो तहका केही कर्मचारीले संयुक्त रुपमा अख्तियारमा निवेदन दिएका थिए। तर, अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बनाउनुको साटो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले फाइल रोकेका हुन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनियमितता छानवीनका लागि उजुरी पर्दा गभर्नरको जिम्मेवारीमा डा. चिरञ्जीवी नेपाल थिए। राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ अहिले पनि कार्यरत छन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चैत २४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त भए। त्यसपछि अख्तियार प्रमुख घिमिरे, गभर्नर अधिकारी र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले ‘आपसी सम्बन्ध’का आधारमा यो मुद्दाको फाइल तामेलीमा पठाएका हुन्।
अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर नेपालसहित डेपुटी गभर्नरद्वय श्रेष्ठ र शिवाकोटी तानिएका थिए। तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरू अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित गर्न शक्तिको दुरुपयोग गरे।
बयान दिन जाँदा ‘चियागफ’ भएपछि...
अख्तियारको पूर्व प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे गृहमन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा सुनाम कमाएका थिए। तर, जब अख्तियार प्रमुख भएर गए, घिमिरेले कुनै उजुरीको अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउनेभन्दा पनि धन्दा चलाउनेमा बढी व्यस्त रहे।
‘राष्ट्र बैंकको निकै संवेदनशील विषयमा मुद्दा परेको थियो, तर प्रमुख घिमिरेले यो अनुसन्धान गरिरहने विषय होइन भनेर फाइन रोक्नुभयो, त्यो फाइल तामेलीमा गएको छ,’ अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।
राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेर अख्तियारले निवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई प्रष्ट पार्न भनेको थियो। तर, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडामार्फत् अख्तियार प्रमुख घिमिरेलाई ‘फाइल अघि नबढे आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्ने’ सन्देश पठाए।
विवादमा मुछिन नचाहने पूर्व गभर्नर नेपालले पनि ‘मिलाउने’ जिम्मा शिवाकोटीलाई नै दिए। फाइलको अनुसन्धान अघि बढिरहेकै बेला नेपालको कार्यकाल सकियो।
र, महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बनेर आए। अख्तियारले अनुसन्धान ‘विचाराधीन’ अवस्थामा राखेको थियो। त्यसपछि गभर्नर अधिकारी र डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले अख्तियार प्रमुख घिमिरेलाई प्रभावमा पारेर फाइल अनुसन्धान स्थगित गरेका हुन्।
शुरुआती चरणमा अनुसन्धान थालेको अख्तियारले पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाको पहलमा अनुसन्धान कार्य प्रभावित गरेको थियो। अख्तियार श्रोतका अनुसार अख्तियारमा बयानका लागि पुगेका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले ‘अतिथि सत्कार’ गरेका थिए।
‘त्यसपछि फाइल अघि बढेको छैन, अब नयाँ प्रमुख आइसकेपछि के कसो हुन्छ भन्न सकिन्न,’ राष्ट्र बैंकको मुद्दाको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने।
राष्ट्र बैंक विराटनगर शाखाको मुद्रा चोरी प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाका ज्वाइँ रामशरण खरेल पनि संलग्न थिए। खरेल पैसा चोरी प्रकरण हुँदा विराटनगर शाखाका उपनिर्देशक थिए।
राष्ट्र बैंकको नोट चोरी प्रकरण नयाँ होइन। यस मामिलामा विराटनगर र भैरहवा शाखा सबैभन्दा अगाडि छन्। तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरसहित उच्च पदस्थ पदाधिकारीको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने चोरी काण्ड सार्वजनिक हुँदैन।
विराटनगरको पैसा चोरी काण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अवकाश प्राप्त निर्देशकको सहयोगमा सार्वजनिक भएको थियो।
‘विराटनगर कार्यालयमा २०७४ सालमा ५ सय र एक हजार दरका नोट जलानको क्रममा नोट जलान कमिटीले नमूना १–२ प्याकेट गन्ती गर्दा रु. १००० दरको १०० वटा थानको नोटको प्याकेटमा २८ वटा नोट थिएनन्। त्यसको तात्पर्य एक प्याकेटमा रु. २८ हजार चोरिएको रहेछ। सो रकम जलानमा त्यो दिन संलग्न कर्मचारीले तिर्नुपर्‍यो।’ ती निर्देशकसहितका कर्मचारीले अख्तियारमा दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनवरत् रुपमा भइरहेको श्रृंखलाबद्ध चोरी अन्य अख्तियार दुरुपयोग र अन्य बैंकको निगरानी गर्ने भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानी कसले गर्ने?’
‘उजुरीमा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीहरू नै सेटिङ मिलाएर चोरीमा संलग्न भए के गर्ने? राष्ट्रिय ढुकुटीको रक्षा कसले गर्ने? रक्षक नै भक्षक भएपछि कसको के लाग्छ? बैंकका जलान गर्ने नोटहरू चोरी हुने गरेको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘जलान गरिने पैसा मात्र होइन, ढुकुटीका चलनचल्तीका, स्टकका नोट नै चोरी हुनेगरेको सुन्नमा आएको छ, त्यसैले अनुसन्धान होस्।’
के थियो राष्ट्र बैंक नोट चोरी काण्ड? (पढ्नुहोस्)
नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थात् राष्ट्रको ढुकुटी। तीन तहको सुरक्षाघेरा र तालाबन्दी। नेपाल राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले राष्ट्रको ढुकुटी कसरी चोरी गरे? राष्ट्र बैंकभित्रै भएको एउटा चोरी घटनाको सार्वजनिक भएकाे छ।
घटना राष्ट्र बैंकको विराटनगर कार्यालयमा भएको हो। प्राप्त फुटेज र चोरीसम्बन्धी प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको कर्तुत खुलेको हो। नोट कटिङ कोठाका कर्मचारीले बन्डलबाट नोट झिकेर लैजाने गरेको पत्ता लागेको छ।
यसरी चोरियो राष्ट्र बैंकबाट पैसा
राष्ट्र बैंकको विशेष निरीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार यो घटना २०७३ साल साउन १७ को हो। नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यालयको धुल्याउन तयार गरिएका नोट चोरी भएको थियो। नोट छनोेट समितिले अनुसन्धानका क्रममा नोट गणना गर्दा एक हजार रुपैयाँ दरका नोट एक प्याकेटमा तीन थान कमी पाएपछि छानबिन थालेको थियो।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन अनुसार बैंकलाई प्राप्त भएपछि रुजु भएर ढुकुटीमा राखिएका चलनचल्ती जाने वा धुल्याउने दुवै प्रकारको नोटमा कुनै अवस्थामा कमी आएमा सम्बन्धित रुजुकर्ता कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। ‘करिब एक वर्षअघि धुल्याउन छुट्याइएका एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ दरका नोटहरू छपाइ ढिलाइले पुनः सर्टिङ गरी प्रयोगमा ल्याउन मुद्रा व्यवस्थापन विभागबाट निर्देशन भएअनुसार कार्यालयले ढुकुटीबाट निकालेर पुनः सर्टिङ गर्दा धेरै प्याकेटमा नोट कमी भएको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एउटै प्याकेटमा २८ वटासम्म पनि नोट कमी भएको पाइएको थियो, नोटमा लगाइएको रातो स्लीपमा सही गर्ने प्रायःजसो कर्मचारीले रकम बुझाउनुपरेको र यस्तो रकम ५–७ हजारदेखि २०–२५ हजारसम्म रहेको थियो, यस सम्बन्धमा कार्यालयबाट कुनै पनि अभिलेख राखिएको देखिएन।’
नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यालयमा नोट धुल्याउने कार्यको लागि मुद्रा व्यवस्थापन (नगद) फाँटअन्तर्गत नोट कटिङ तथा जलान एकाइण्को व्यवस्था गरिएको छ। उक्त एकाइमा सहायक निर्देशक इन्द्रप्रसाद शर्मा र कार्यालय सहयोगीहरु मुनेश्वर डोम, हरिबहादुर तामाङ, मिलाप श्रेष्ठ, आशाकुमारी डोम र सुनेच्री देवी डोम कार्यरत थिए।
सहायक निर्देशक इन्द्रप्रसाद शर्माको काम नोट कटिङको व्यवस्थापन गर्ने एवम् रेखदेख गर्ने, मुनेश्वर डोम, हरिबहादुर तामाङ र मिलाप श्रेष्ठको काम नोट कटिङ गर्ने र आशाकुमारी डोम र सुनेच्री देवी डोमले कटिङ गरेका नोट बाध्ने र सफाइ गर्ने दायित्व थियो।
विराटनगर कार्यालयले सामान्यतयाः क्यान्सिल्ड गरिएको एक दिनपछि नोटहरू धुल्याउने गर्छ। २०७४ साल साउन १६ मा क्यान्सिल्ड गरिएका नोट साउन १७ मा धुल्याइएको थियो।
जसमा पाँचका ८ थान, १० का २ थान, २० को १ थान, ५० को एक थान, एक सयका दुई लाख थान, पाँच सयको एक थान र एक हजार दरका एक लाख दुई थान नोट जलाउनुपर्ने थियो।
तर, नोट धुल्याउने समितिले नमूना छनोट गर्दा एक हजार दरको एक प्याकेट नोटमा तीन थान नोट कमी रहेको पाइएको थियो। त्यसपछि प्याकेटको स्लिपमा दस्तखत रहेको सम्बन्धित कर्मचारी सुशीला थापाबाट शोधभर्ना गर्न लगाइ नोट कमी भएको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गरी नोट धुल्याउने निर्णय भएको थियो।
कस्तो हुन्छ नोट जलाउने प्रक्रिया?
कार्यालयले धुल्याउने नोटहरू (रातो स्लीप लागेको) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा नोटकोषबाट प्राप्त भएर रुजु गरी ढुकुटीमा राखिने गरिन्छ। कार्यालयको एक्सचेन्ज तथा झुत्रो नोट सटही काउन्टरमा आएका नोटहरू सर्टिङ गरी बन्डल बनाएर मूल बाकसमार्फत् ढुकुटीमा राखिएको हुन्छ।
ढुकुटीमा राखिएको रातो स्लीप लागेको धुल्याउने नोटहरु आवश्यकता अनुसारको संख्यामा ढुकुटीबाट नोट कटिङ एकाइमा लगेर कटिङपछि पुनः ढुकुटीमा राखिने गरिन्छ। कटिङ गरी क्यान्सिल्ड गरिएको नोट एक दिनपछि पुनः ढुकुटीबाट निकालेर प्रक्रिया अनुसार जलाउने गरिन्छ। क्यान्सिल्ड गरेको नोटको प्याकेटमा नोटको कमी आएको अवस्थामा स्लीपमा दस्तखत गर्ने रुजुकर्ता कर्मचारीले बुझाउने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
यस्तो थियो घटनाक्रम (प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै)
सिसिटिभी फुटेजको रेकर्डअनुसार ढुकुटीबाट कटिङका लागि १०ः४२ः२७ बजे नोट ल्याइएपछि कार्यालय सहयोगी मुनेश्वर डोम र सहायक निर्देशक इन्द्रप्रसाद शर्माले नोटको बन्डल खोली टेबलमा नोट राख्छन्। १०ः५३ः२० बजेबाट निज डोमले नोट कटिङ कार्य सुरु गर्छन्।
बक्साबाट बन्डल निकालेर बन्डलको डोरी खोली कटिङ टेबलमा नोटका प्याकेट राख्ने कार्य प्रायः इन्द्रप्रसाद शर्माले गर्छन्। सो कार्य गर्दा केही नोटका प्याकेटहरू छुट्याइ टेबलको छेउमा राखेको देखिन्छ। नोटमा तीनवटा प्वाल पारिएकाले एक सय दरको नोट कटिङ गरेको भन्ने बुझियो।
–११ः११ः५५ बजे कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर तामाङले कटिङ कार्य सुरु गर्छन् र, मुनेश्वर डोमले बन्डल खोल्ने कार्य गर्छन्। शर्मा कोठामा आउनेजाने क्रममा कोठामा आउँछन्। ११ः१३ः३३ बजे टेबलमा राखिएको नोटबाट केही प्याकेट (पाँच प्याकेट बुझिएको) नोट टेबलको छेउमा छुट्याइ बाहिर जान्छन्।
–बन्डलको नोट खोली टेबलमा राख्ने गरेको मुनेश्वरले ११ः१५ः२० बजे शर्माले छुट्याएको नोटको चाङलाई तलमाथि चलाउँछन्। ११ः१५ः४० बजे पाइन्टको खल्तीमा केही राखेको देखिन्छ। मुनेश्वर ११ः१७ः०४ बजे खाली बाकस लिएर बाहिर जान्छन्।
–१ः१९ः५० बजे शर्मा आउँछन्। नोटको बन्डल खोली नोट टेबलमा राख्न थाल्छन्। ११ः२१ः०० बजे पहिले छुट्याएर राखेको नोटको चाङमा दुुई प्याकेट नोट राख्छन् र, बाहिर जान्छन्।
–११ः२२ः३० बजे मुनेश्वर आउँछन्। टेबलका नोट कटिङ गर्नेतर्फ सार्छन्। मेसिनको पछाडि गई ११ः२२ः५३ बजे पाइन्टको खल्तीबाट नोटजस्तो बुझिने वस्तु झिकेर भुइँमा फाल्छन् र, खुट्टाले सार्छन्। यसपछि अगाडि आएर बाहिर निस्कन्छन्।
–११ः२३ः१५ बजे मुनेश्वर नोटको दोस्रो पटकको बाकस लिएर आउँछन्, र, कटिङमा नोट दिन थाल्छन्, यही क्रममा ११ः२७ः३३ बजे सर्टको अगाडिको खल्तीमा दुईपटक नोट राखेकोजस्तो देखिन्छ।
–११ः२९ः५२ बजे स.नि. शर्मा आउँछन्। एक मिनेटजतिमा बाहिर गई पुनः १.५ मिनेटमा आउँछन् र, टेबलको छेउमा छुट्याएको नोटको प्याकेटको चाङ (सात प्याकेट हुनुपर्छ) लिएर जान्छन्।
– ११ः३६ः०० वजे मुनेश्वरले सर्ट र पाइन्टको खल्तीमा केही राखेको देखिन्छ। एक मिनेट जतिमा उनी बाहिर निस्कन्छन् र, चार मिनेटपछि आउँछन्।
– ११ः४५ः४६ वजे स.नि. शर्माले केही प्याकेट नोट ल्याइ टेबलमा राखेको र एक प्याकेट नोट लिई पुनः बाहिर गएर तत्कालै एक प्याकेट नोट लिई आएको र ११ः४५ः३८ मा बाहिर गएको देखिन्छ।
– ११ः४९ः०६ वजे मुनेश्वरले सर्टको खल्तीमा नोट तानेर हालेजस्तो देखिएको र नौ मिनेटपछि खाली बाकस लिएर बाहिर गएको देखिन्छ।
– ११ः५९ः०५ वजे स.नि.शर्मा आएर नोटको बन्डल फुकाइ नोट टेबलमा राख्छन्। दुई मिनेट जतिमा बाहिर गएको र यसको एक मिनेटजतिमा आएको र तुरुन्त बाहिर गएको देखिन्छ। पुनः १२ः१७ः१० बजे आएर दुई मिनेट जतिमा बाहिर जान्छन् । फेरि १२ः२५ः४५ बजे आएर एक मिनेटमा बाहिर जान्छन् ।
– ११ः५९ः२३ वजे मुनेश्वरले तेस्रो पटकको नोटको बाकस ल्याई तुरुन्त बाहिर जान्छन् । यसपछि १२ः१४ः४० बजे आएर तीन मिनेटपछि बाहिर जान्छन्। पुनः १२ः१९ः१६ बजे आएर १२ः२७ः४५ बजे सय दरको नोट कटिङ सकिएपछि बाहिर जान्छन्।
– १२ः२८ः२८ बजे स.नि. इन्द्रप्रसाद शर्मा आउँछन् र निजले तेस्रो पटकको बाकसको नोटको बन्डल फुकाइ नोट टेबलमा राख्छन्। सय दरको नोट कटिङ सकिएकोले हरिबहादुर तामाङ बाहिर जान्छन्। १२ः३५ः१० बजे निज शर्मा बाहिर गई करिब पौने दुई मिनेटमा आउँछन्।
– १२ः३७ः१२ वजे स.नि. इन्द्रप्रसाद शर्माले नोट कटिङ गर्न थाल्छन् र, काटिएको नोटलाई नोट भएको टेबलमै राख्छन्। त्यस समय नोट कटिङ गर्ने दुवै कर्मचारी बाहिर गएका हुन्छन्। नोटमा चारवटा प्वाल पारेको देखिएकाले उक्त नोट हजार दरको भएको बुझिन्छ।
– १२ः३९ः२२ बजे स.नि. इन्द्रप्रसाद शर्माले नोट कटिङ गर्दाको २३ औं प्याकेट मेसिनमा अड्कन्छ र पुनः सो नोट कटिङ गरेपछि मेसिन बन्द गरी उठेर पंखा बन्द गरी नोट बाँध्ने कर्मचारी रहेको स्थानमा हेरेर १२ः४०ः२० बजे नोट राखेको टेबलमा जान्छ। टेवलको छेउमा परेको नोटको एक प्याकेट उठाएर अरु नोट भएको ठाउँमा राख्छन् र, पाइन्टको बायाँ खल्तीबाट नोटको प्याकेटजस्तो देखिएको वस्तु टेबलको नोट भएको ठाउँमा राख्छन्। नोट भएको टेबललाई पछाडि पारी टेबलमा अडेस लिएर उभिई ढोकातिर फर्केर एक हातले नोट चलाएको र पाइन्टको खल्तीमा केही राखेको बुझिन्छ। यसपछि हातलाई खल्तीबाट कानमा पुर्‍याएर कन्याएकोजस्तो गरी १२ः४०ः३८ वजे बाहिर निस्कन्छन्। कोठामा सफाइ कर्मचारी रहेको देखिन्छ।
– १२ः४३ः१८ वजे स.नि. इन्द्रप्रसाद शर्मा आउँछन्। बायाँ खल्तीमा हात राखी ढोकातिर हेरेर नोट भएको टेबलमा अडेस लागेर बस्छन्। आएको ६ सेकेन्डमै पाइन्टको खल्तीबाट केही राखेकोजस्तो बुझिन्छ र, तत्कालै बाहिर जान्छन्। आधा मिनेटजतिमा पुनः आउँछन् अनि तत्कालै बाहिर जान्छन्।
– १२ः४६ः४५ बजे स.नि. इन्द्रप्रसाद शर्मा आउँछन्। बायाँ खल्तीमा हात राखी ढोकातिर हेरेर नोट भएको टेबलमा अडेस लागेर बस्छन्। टेबलमा केही राखेकोजस्तो बुझिन्छ र, टेबलको नोट चलाउन थाल्छन्। बाकसको नोटको बन्डल फुकाएर नोट टेबलमा राख्छन्। नोट मिलाएकोजस्तो देखिन्छ। १२ः४७ः२० वजे टेबललाई पछाडि पारी ढोकातर्फ हेरेर उभिँदा खल्तीमा केही राखेजस्तो देखिन्छ। यसपछि मुनेश्वर आउँछन् र नोट कटिङ गर्न थाल्छन् । शर्माले आफूले कटिङ गरेका नोटहरू टेवलबाट बाँध्ने ठाँउ (भुइँ) मा राख्छन्।
– १२ः५२ः३२ वजे स.नि. शर्मा बाहिर जान्छन्। एक मिनटमा फर्केर आउँछन् र तत्कालै बाहिर जान्छन्। बाहिर गएको दुई मिनटपछि आएर बन्डल फुकाउने काम गरी १३ः००ः२० वजे बाहिर जान्छन् । एक मिनटपछि आएर पुनः १३ः०२ः३४ बजे बाहिर जान्छन्।
– १३ः०४ः४० वजे मुनेश्वरले मेसिन बन्द गरी मेसिनको पछाडि गएर दुई प्याकेट नोट पाइन्टको खल्तीमा राखेर बाहिर जान्छन्। सो समयमा कोठामा कोही नभएकोजस्तो देखिन्छ।
– १३ः०५ः४० बजे हरिबहादुर आउँदछ र नोट कटिङ गर्न थाल्छ । १३ः०७ः०६ बजे स.नि.शर्मा आउँछन्। १३ः०८ः४१ बजे मुनेश्वर आउँछन्। १३ः०९ः१५ बजे स.नि.शर्मा बाहिर जान्छन्।
– १३ः११ः२१ बजे मुनेश्वर हरिबहादुरको पछाडि बसेको स्थानबाट उठेर कटिङका लागि नोट सारेर १३ः११ः५४ बजे बाकस लिएर बाहिर जान्छन्। तत्कालै भित्र आउँछन् र, नोट कटिङका लागि दिन थाल्छन्। यही क्रममा १३ः१३ः१२ बजे मुनेश्वरले नोटको प्याकेट पाइन्टको खल्तीमा राख्छन् र, एकछिन अगाडि आफू बसेको ठाउँ (हरिबहादुरको पछाडि) बाट एक प्याकेट नोट उठाई हरिबहादुरलाई कटिङ गर्न दिन्छ। हरिबहादुरले आश्चर्यको भावमा हेरेको देखिन्छ। मुनेश्वर १३ः१७ः०५ बजे बाहिर जान्छन् र, ४.५ मिनेटपछि आउँछन्।
– १३ः३०ः१० बजे स.नि.शर्मा आउँछन् र, आधा मिनेटमै बाहिर जान्छन्।
– कटिङ गरिरहेका हरिबहादुरको पछाडि मुनेश्वर बसेको र १३ः३५ः२० बजे सो ठाउँवाट १ प्याकेट नोट उठाई टेबलमा राख्छन्।
– १३ः४५ः०५ बजे स.नि.शर्मा आउँछ र, तत्कालै बाहिर जान्छन्।
– १३ः४७ः३२ बजे मुनेश्वर बाहिर जान्छन्।
– १३ः४९ बजे कटिङ गर्ने कार्य समाप्त हुन्छ।
#महाप्रसाद_अधिकारी #नेपाल_राष्ट्र_बैंक #चिरञ्जीवी_नेपाल #चिन्तामणि_शिवाकोटी #शिवराज_श्रेष्ठ #नवीनकुमार_घिमिरे
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस २७, २०७७ १५:१८